‘निकिशा’माथि सडकमा भएको दु’र्व्यवहारको भिडियोबारे हेडक्वार्टरको यस्तो पत्र! – PathivaraOnline
Home > समाज > ‘निकिशा’माथि सडकमा भएको दु’र्व्यवहारको भिडियोबारे हेडक्वार्टरको यस्तो पत्र!
admin November 18, 2020 November 18, 2020 समाज	0
निकिशा’ श्रेष्ठमाथि सडकमा दुर्व्यवहार भएकोबारे आवश्यक छानबिन तथा कारबाही हुने भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार साइबर ब्युरोलाई श्रेष्ठमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। श्रेष्ठलाई सडकमै अपशब्द प्रयोग गरी एक समूहले दुर्व्यवहार गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। उक्त दुर्व्यवहार राजधानी काठमाडौंको कुन ठाउँमा भएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले उक्त भिडिओबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको बताए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार साइबर ब्युरोलाई श्रेष्ठमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
बुधबार सर्वाधिक शेयर घटेका कम्पनीहरु
काठमाडौं । दोहोरो अंकले बढेको बुधबारको बजारमा ६ कम्पनीको शेयरमूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । तिहारपछि खुलको बजार बुधवार २३ दशमलव ३२ अंकले बढेको छ । यस दिन व्यापारिक समूहको शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् भने जलविद्युत समूहका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् ।
बुधवारको कारोबारमा व्यापारिक समूहको परिसूचक ९ दशमलव ९८ प्रतिशत बढेको हो भने जलविद्युत समूहको १ दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको हो । कारोबारमा आएका १२ समूहमध्य जलविद्युत समूहसँगै बैंकिङको शून्य दशमलव १ प्रतिशत र विकास बैंकको शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत घटेको छ ।
दोहोरो अंकले उकालो लागेको बजारमा ८३ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ९४ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । मूल्य घट्ने ९४ कम्पनीमध्य पनि यो दिन ६ कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
यस दिन घलेम्दी हाइड्रोको ५ दशमलव ८० प्रतिशत, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको ५ दशमलव ७५ प्रतिशत, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको ५ दशमलव ६५ प्रतिशत , सबैको लघुवित्तको ५ दशमलव ५८ प्रतिशत, नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको ५ दशमलव ५३ प्रतिशत र सिन्धु विकास बैंकको शेयरमूल्य ५ दशमलव ११ प्रतिशत घटेको हो ।
खुशीकाे खबरः अन्ततः कोरोनालाई पराजित गर्दै घर फर्किए अध्यक्ष केसी!
ओढारमा बसेर भैंसी पाल्दै दुई छोरालाई मास्टर डिग्री पढाउने यी महान आमालाई सम्मान स्वरूप एक सेयर गरौ
सौतेलो बावुले ब-ला-त्कार गर्दा कन्चनपुमा तीन वर्षीया बालिकाको मृ त्यु
राजा बिरेन्द्र जनतामा यसरी समर्पित थिए, जनताको कर दुरुपयोग गर्दैनथे! हेर्नुस् बिस्तारमा!